I-Lakeside Cozy Bear Cabin
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguKim & Scott
I-Cozy Bear Cabin inika indawo yokubaleka unyaka wonke kwindawo yothando kunye nobungangamsha, imizuzu ukusuka eWakefield. Imi kwindawo ephambi kwechibi, enonxweme lwabucala, kwaye ijikelezwe ziihektare ezi-3 zehlathi elishinyeneyo, yeyona ndawo ifanelekileyo yokuzimela kunye noxolo.
Ikhabhinethi yelog entle ibekwe kwiihektare ezi-3 zehlathi kwaye ibekwe phambi kwechibi, ngaphezulu kwe-300ft yonxweme lwabucala. Igumbi eliphambili libonisa isitovu seenkuni kunye nendawo yokutyela, kunye nendawo yokuhlala enomabonwakude kunye nebhedi yesofa yokumkanikazi. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngokupheka, ukutya kunye neglasi, izixhobo zombane eziphambili, kunye neziqholo ezisisiseko kunye neziqholo. Igumbi lokulala liphethe ibhedi elingana nokumkani, kwaye iindawo zokulala, amashiti, iitawuli kunye neesepha zibonelelwa ngokuhlala kwakho.
Ngaphandle uya kufumana isakhelo esithandekayo esijikeleze ivaranda enefenitshala yepatio kunye nebarbecue. Itubhu enobunewunewu enezihlalo ezi-5 ekufuphi nekhabhathi ilindele ukuba uphumle phantsi kweenkwenkwezi. Funda incwadi okanye indawo yokuphumla kwi-hammock yethu epholileyo yabantu aba-2!
Sinedokhi enkulu ephambi kwechibi onokuthi uqubhe kwaye ulobe, kwaye unikezele ngokusetyenziswa kwephenyane lethu, i-kayak, iipaddles kunye neebhatyi zobomi kwiindwendwe zethu. Ebusika sinikezela ngee-snowshoes kwiindwendwe zethu zokuhlola ipropathi okanye ukuhamba ngeendlela ezikufutshane zeGatineau Park!
4.89 out of 5 stars from 363 reviews
4.89 · Izimvo eziyi-363
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi363
Yonwabele i-adventure unyaka wonke, kanye ngaphandle komnyango wakho wangaphambili. Ichibi lilungele ukuqubha kunye nokuloba, kwaye linokujongwa ngephenyane elifumanekayo kuwe kwisiza. Kwiinyanga zasebusika, lonwabele ichibi okanye indlela ekufutshane yeGatineau Park kwizihlangu zekhephu okanye kwiskis esinqumla ilizwe. Iinkuni ezisingqongileyo kwipropathi yethu zilungele ukuhamba, okanye ukufumana i-perch yokuphumla kwaye uyifake yonke.
IKhabhin yimizuzu kude entliziyweni ye-Wakefield, apho uya kufumana iivenkile zasekhaya kunye neegalari zobugcisa, iindawo zokutyela ezigqibeleleyo kunye neekhefi ezinomphefumlo, kunye nolonwabo olukhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Kim & Scott
Sifumaneka nangaliphi na ixesha ngaphambi okanye ngexesha lokuhlala kwakho ukuze sikuncede sikukolele kwipropathi kunye nommandla osingqongileyo, kwaye siyakuvuyela ukukunceda uphendule nayiphi na imibuzo okanye ukujongana nayo nayiphi na inkxalabo onokuba nayo. Nceda ungalibazisi ukubuza!
Sifumaneka nangaliphi na ixesha ngaphambi okanye ngexesha lokuhlala kwakho ukuze sikuncede sikukolele kwipropathi kunye nommandla osingqongileyo, kwaye siyakuvuyela ukukunceda uphe…
UKim & Scott yi-Superhost
Inombolo yomthetho: 300044
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sainte-Cécile-de-Masham